Languages Twi Yehowa Adansefo
Wↄ Mateo 24:45-51, Yesu kyerɛkyerɛɛ nkoa soronko abien (asomfo) a wↄn wura de wↄn sii n’afie agyapade so bere a ↄwↄ akwantuom. Akoa biako yɛe “Ↄnokwafo ne Ↄbadwemma” (Wiase Foforo Nkyerɛase-WFN) bere a ne wura fii akwantuom san bae no, nti ↄkamfoo no de no sii n’agyapade nyinaa so. Akoa ↄfoforo no de, woannyɛ ↄnokwafo bere a ne wura bae, enti ↄtowee no kↄkaa nyaatwomfo no ho.
Bere a biribiara nni ↄyɛsɛm yi mu a ɛkyerɛ sɛ nsɛm yi fa nyamesom ahyehyɛde ho no, Yehowa Adansefo ka sɛ ↄyɛsɛm yi yɛ nkↄmhyɛ nsɛm a ɛkᾱ fa Ↄwɛn Aban Ahyehyɛde no ho. Wↄka de hoahoa wↄnho sɛ Yehowa Nyankopↄn na ɛpawee wↄn Ahyehyɛde no sɛ ↄnfa honhom fam aduan mma Onyankopↄn nkurↄfo wↄ awiei mmere mu denam nhoma ne nsɛmma nhoma bebree a woatintim so.
AHOFADI PAA - So wowᴐ Ahofadi ankasa sԑ wotwe woho fi Ͻwԑn Aban Ahyehyԑde no Ho a?
“...yԑsom Nyankopɔn koro pԑ a ԑwom baasa, Nyankopɔn Baasakoro a wɔaka abom. Ԑnyԑ sԑ yԑnntumi nhu nsonsonoe ԑda wɔn ntam, anaasԑ wɔn gyinapԑn no mu kyekyԑ. Efisԑ Agya no yԑ Nyame Nipa biako, Ɔba no nso yԑ biako, ԑnna Honhom Kronkron nso yԑ biako. Nanso, Agya, Ɔba ne Honhom Kronkron wɔn Nyame Ti no bom biako, wɔn anuonyam ne wɔn kԑseyԑ nyinaa yԑ pɛ ne koro, sԑnea Agya no te, saa ara na Ɔba no ne Honhom Kronkron no nso te. Agya no wɔammɔ no, Ͻba no wɔammɔ no saa ara na Honhom Kronkron nso wɔammɔ no. Agya no boro adwen ntease so, saa ara na Ɔba no ne Honhom Kronkron no nso boro adwen ntease so. Agya no te hɔ daa, Ɔba no te hɔ daa, saa nso na Honhom Kronkron no te hɔ daa. Nanso yԑnni Nyankopɔn baasa a wɔyԑ mmeresanten na mmom biako na ԑyԑ mmeresanten. Eyi nti Agya no yԑ Nyankopɔn, Ɔba no yԑ Nyankopɔn ԑnna Honhom Kronkron no nso yԑ Nyankopɔn. Nanso wɔnnyԑ Nyankopɔn baasa na mmom Nyankopɔn biako”-Athanasian Amanne. (Creed)
HENANOM NE YEHOWA ADANSEFO? -WϽn AbakϽsԐm, Gyidi Ne Amanne
DԐN ENTI NA WϽNYԐ AKRISTOFO?